general insurance company nepal limited(general insurance company nepal limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानीकर्ताले चलखेल गरे: नेप्से
काठमाण्डौ । धितोपत्रको दोस्रो बजार प्रभावित पार्न पछिल्लो समय अडलटमा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको छ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड(जीआइसी)को सेयर यही साता नेप्सेमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार भइरहेको छ, तर गत बुधबार स्टक ब्रोकर नम्बर ४ ओपल सेक्युरिटीजबाट १० कित्ता टुक्र्याएर १ कित्ता र ९कित्ता गरी...
आज पनि जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमा चलखेल
काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर नम्बर २८ श्रीकृष्ण सेक्युरिटिजबाट आज बिहीबार पनि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको सेयरमा जानाजान चलखेल भएको छ। हिजैदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा न्यूनतम १० कित्ताभन्दा तल टुक्र्याएर बिक्री गर्दैै चलेखल भएको हो। नेप्सेको फ्लोरसिटमा जनरल इन्स्योरेन्सको १०...
धितोपत्र बजारमा आजबाट जनरल इन्स्योरेन्सको नियमित कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको बुधबार प्रिओपनिङ सेसनमा पहिलो कारोबार भएको छ। योसँगै बुधबारबाटै धितोपत्र दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको सेयर नियमित कारोबार सुरु भएको छ। आज स्पेसल प्रिओपनिङ सेसन (बिहान १०ः३० देखि १०ः४५ बजे) यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०५ रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भएको छ। नेप्सेले तोकेको मूल्य सीमा...
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओको रिजल्ट प्राप्त भएको छ । धितोपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले आज बिहान १०ः३० बजे आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । आइपीओमा कुल ७ लाख ९६ हजार ७३४ आवेदकबाट २ करोड १४ लाख ५९ हजार ३७० कित्ताका लागि आवेदन परेको सो क्रममा बताइयो । परेका आवेदनमध्ये २१८८ जनाबाट ४८ हजार ६४० कित्ताका...
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । आइपीओमा कुल ७ लाख ९६ हजार ७३४ आवेदकबाट २ करोड १४ लाख ५९ हजार ३७० कित्ताका लागि आवेदन परेको सो क्रममा बताइयो । परेका आवेदनमध्ये २१८८ जनाबाट ४८ हजार ६४० कित्ताका लागि आएको आवेदन रितपूर्वक नभएका कारण रद्ध गरिएको...
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड आज १०ः३० बजे
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको आईपीओ आज मंगलबार बिहान बाँडफाँड हुने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलको कार्यालयमा बिहान १०ः३० बजेबाट आईपीओ बाँडफाँड हुने कम्पनीले जनाएको छ। क्यापिटलले हिजो सोमबार आईपीओमा प्राप्त आवेदनको तथ्यांक रुजु र प्रिअलटमेन्ट गर्ने काम पूरा गरेको...
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ मंगलबार बाँडफाँड हुने सम्भावना, साढे ५ लाख आवेदकले नपाउने
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड पर्सि मंगलबार हुने सम्भावना रहेको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडका एक अधिकारीका अनुसार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्राप्त आवेदनको तथ्यांक रुजू भइरहेको र आज प्रिअलटमेन्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘मंगलबार चाहिँ आईपीओ...
पशुपति क्षेत्रमा आज र भोलि साँझ ७ बजेबाट आधा घन्टा ‘ब्ल्याकआउट’
काठमाण्डौ। पशुपति क्षेत्रमा आज आइतबार र भोलि सोमबार साँझ ७ः०० बजेदेखि ७ः३० बजेसम्म बत्ती निभाउने (ब्ल्याक आउट) कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा हालै प्रस्ताव गरिएको गुरुयोजनाको विरोधमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ। स्थानीयवासीसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट गुरुयोजना बनाउने पशुपति...
जनरल इन्स्योरेन्समा आइपीओ आवेदनको फाइनल डेटा यस्तो छ, अर्को साता बाँडफाँड हुने
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडमा आवेदनको वर्षा भएको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओमा कुल ८ लाख २० हजार ५१८ जनाको आवेदन परेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गरेको २७ लाख ५० कित्ताका लागि २ करोड २७ लाख २७ हजार ५६० कित्ताका आवेदन परेको सीडीएससीको भनाइ छ । उक्त आवेदन अन्तिम तथ्यांक...
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिन आज अन्तिम अवसर
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिन आज बुधबार (असोज १४ गते) अन्तिम अवसर रहेको छ। कम्पनीले गत असोज ११ गतेबाट प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरका ३० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ बिक्री खुलाएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ३० लाख कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५...
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओमा दोश्रो दिन नै आवेदनको उछाल
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको आइपीओमा दोश्रो दिन अचाक्ली आवेदन परेको छ । सिडिएससीका अनुसार सोमबार अपरान्ह ५ बजेसम्म आइपीओ खरीदका लागि ५ लाख १७ हजार भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । उनीहरुले १ करोड ४७ लाख १५ हजार भन्दा बढी कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो कम्पनीको आइपीओमा पहिलो दिन ३२ लाख ४४ हजार ६३० कित्ता...
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आजदेखि खुलाएको आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ । यो कम्पनीको आइपीओमा आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म ३२ लाख ४४ हजार ६३० कित्ता खरीदका लागि आवेदन परेको हो । सिडिएससीका अनुसार कुल ९७ हजार १७० आवेदकले आइपीओ खरीदका लागि आवेदन हालेका छन् । आवेदन दिने ‘मेरो सेयर’को...
आजबाट जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्तासम्म आवेदन दिने ?
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको रु. ३० करोडबराबरको आईपीओ आज आइतबारबाट बिक्री खुला गरिएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ३० लाख कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको २७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स�...
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको रु. ३० करोडबराबरको आईपीओ आउँदो आइतबार (असोज ११ गते) बाट निष्कासन हुँदैछ। कम्पनीले चुक्तापुँजी रु. १ अर्बको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ३० लाख कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि...
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ असोज ११ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले यही असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३० करोड रुपैयाँबराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको कुल सेयर संख्यामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता संस्थाका कर्मचारी र १ लाख ५० हजार...